Sare u qaadidda nabadda Geeska Afrika
Tani waa faallo ka tarjumeysa aragtida dawladda Mareykanka
Ergeyga Gaarka ah ee Geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa hadda dhammeystiray booqashadiisii ugu horreysay ee dalalka Masar, Eritrea, Suudaan iyo Ethiopia.
Farriintiisu waxay ahayd in Mareykanku ay ka go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinka gobolka ka jira iyo in la taageero barwaaqada iyo xasiloonida Geeska Afrika oo ay muwaadiniinteeda cod ku yeeshaan dowladooda.
Marka hore, Mareykanku wuxuu rumaysan yahay in dowlad madax bannaan oo midowday Ethiopia ay muhiim u tahay aragtidan, Hase yeeshe weli waxaa jira walaac qoto dheer oo ku saabsan sii kororka kala qeybsanaanta siyaasadeed iyo midda qowmiyadeed ee dalka oo dhan.
Xadgudubyada ka socda Tigray iyo baaxadda xaaladaha degdegga ah ee bani'aadamnimo waa wax aan la aqbali karin. Mareykanku wuxuu la shaqeyn doonaa xulafadiisa caalamiga ah iyo saaxiibadiisa si loo helo xabad joojin lagu soo afjaro iska-horimaadkan arxan darada ah si loo fidiyo gargaarka nafaha lagu badbaadiyo ee sida degdegga ah loogu baahan yahay iyo in in loo qabto lagulana xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha .
Dhibaatada ka jirta Tigray ayaa sidoo kale calaamad u ah culeysyo ballaaran oo qaran oo hor istaagay dib u habeyn macno leh markii Ergeyga Gaarka ah Feltman uu kala hadlay Raiisel Wasaaraha Itoobiya Abiy iyo hogaamiyaasha kale, caqabadahaas waxaa si wax ku ool ah wax looga qaban karaa iyada oo loo marayo dadaal lagu dhisayo is afgarad qaran oo ku saleysan ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo siyaasadeed ee dhamaan dadka Itoobiya, si loogu daro doorashooyin xor iyo xalaal ah.
Joogitaanka xoogagga Eriteriya ee Itoobiya waxay lid ku tahay yoolalkaas.
Magaalada Asmara, Ergeyga Gaarka ah Feltman wuxuu hoosta uga xariiqay Madaxweyne Isaias Afwerki inay lama huraan tahay in ciidamada Eriteriya si deg deg ah uga baxaan Itoobiya.
Xilliga Kala guurka siyaasadeed ee Suudaan ayaa ah fursad jiilba jiil ah oo tusaale u noqon kara gobolka, maadaama Ergeyga Gaarka ah Feltman uu hoosta uga xariiqay hoggaanka Suudaan Mareykanka in uu sii wadi doono taageerida ku-meelgaarka waddanka xiligiisa kala guurka ee u socda dhanka dimoqaraadiyada si Suudaan ay u sheegato kaalinteeda masuuliyadeed ee arbaynimo ee gobolka ka dib soddon sano oo xasilooni daro ah.
Mareykanka sidoo kale waxaa ka go'an inuu gacan ka geysto xallinta khilaafka ka taagan biyo xireenka iyo khilaafaadka? xudduudaha Suudaan, sidaa darteed ma wiiqayaan horumarka lugta ku taagan ee la gaadhay tan iyo isbedelka.
Ergayga gaarka ah Feltman wuxuu kala xaajooday hogaamiyayaasha Addis Ababa, Cairo iyo Khartoum Walaaca Masar iyo Suudaan ee biyaha.
Amniga iyo badbaadada biyo xireenka iyo sidoo kale baahida ay Itoobiya u qabto koronto-dhalinta ee horumarka arrimahan waa in lagu xaliyaa wada-hadal dhexmara dhinacyada uu hoggaanka u yahay Midowga Afrika.
Dawlada Mareeykanka waxaa ka go,an nabadeeynta iyo dib-u-heshiisiinta Geeska Afrika.